Shirkad shaqaaleysiinaysa da’da ka weyn 55 jir! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Shirkad shaqaaleysiinaysa da’da ka weyn 55 jir!
Muqdisho – EverYoung oo ah shirkad tiknoolojiyeed xarunteedu tahay caasimadda Seol, Koofur Kuuriya ayaa leh hannaan gaar ah oo adag kaas oo ay u marto qaadashada shaqaale cusub – musharraxu waa inuu ugu yaraan jiraa 55 sano. Waxay sidaas kusoo dhaqmaysay taniyo markii la helay sanadkii 2013, hadda waxa u howl-gala 420 howl-wadeenno u dhaxeeya 55-jir ilaa 83-jir.
“Kuuriya way cimrinaysaa, saameyntooduna way kulaalaysaa, sidaas darteed waxaan rumeysannahay in ka qeyb-galkoodu uu muhiim u yahay dhaqaalaha,” Chung ayaa u sheegay Channel News Asia. “Waxaan rumeysanahay shaqaaleysiintooda inay jawaab u noqonayso sare u qaadista heerka nololeed.”
Previous: Cantona oo farriin-qoraaleedkii Conte ee Costa ku jeesjeesaya